စိတ်ကူးပျော်ရာ: January 2014
ကံ နဲ့ အကျိုးပေးခွင့်
တစ်ခါတစ်လေတော့လဲ ကံတရားကနားလည်ရအခက်သား ။
ကောင်းကံတွေ ပြုနေပေမယ့် အဆင်မပြမှု တွေနဲ့ချည်းပဲတွေ့နေရ တတ်ပါတယ်။
မကောင်းကံတွေနဲ့ ယှဉ်နေပေမယ့်လဲ ဘာပဲလုပ်လုပ် အဆင်ပြေနေတတ်ပါတယ်။
ဒီအဖြစ်မျိုးတွေက ၀န်းကျင်တိုင်း မှာ တွေ့နေရတာဖြစ်လေတော့ အမြင်အားဖြင့်
သိပ်ပြီးဆန်းလှတယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဆန်းတာက ကံရဲ့သဘော တရားပါ။
♦ ဥပမာပဲ ထားပါတော့ ၊
ကိုယ့်ဝန်းကျင်မှာ ရှိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်၊မကောင်းကံမှန်သမျှ အကုန်လုပ်နေတယ်၊
ဒါပေမယ့် အဲဒီလူမှာ ချမ်းသာလိုက်တာ မပြောပါနဲ့တော့၊ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ ကြည့်ဦး မလား၊
အားလုံးချောမွေ့လို့၊ ဘာဆိုဘာမှ အခက်အခဲမရှိ။
အပေါ်မှာတောင် သံသယ၀င်ချင်စရာ၊ကံအပေါ် နားလည်ရ ခပ်ခက်ခက်။
♦ ဟိုး… စောစောပိုင်း ကာလတွေကတော့
မိမိလဲ ဒီအတိုင်းပါပဲ။နောက်ပိုင်းစာတွေဖတ်ရင်း “ သမ္ပတ္တိလေးပါးနဲ့ ၀ိပတ္တိလေးပါး ” အကြောင်း
ဖတ်မိတော့မှာပဲ ထိုက်သင့်သလောက် နားလည်ခဲ့ရပါတယ်။
ကံဆိုတာ ကုသိုလ်ကံနဲ့ အကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိပါတယ်၊
ကောင်းကံနဲ့ မကောင်းကံပေါ့၊အဲဒီ ကံနှစ်ခုဟာ ပြုတိုင်းတော့ ပုံသေ အကျိုးမပေးပါဘူး။
သမ္ပတ္တိလေးပါးနဲ့ ကြုံနေရင် မိမိပြုထားတဲ့
အကုသိုလ်ကံဟာ အကျိုးမပေးနိုင်သလို ၊ ၀ိပတ္တိလေးပါးနဲ့ ကြုံနေရင်လဲ မိမိပြုထားတဲ့
ကုသိုလ်ကံက အကျိုးမပေး နိုင်သေးပါဘူး။
♦ “သမ္ပတ္တိ” ရဲ့ အနက်က “ပြည့်စုံခြင်း”၊
♦ “၀ိပတ္တိ” ရဲ့ အနက်က “ချွတ်ယွင်းခြင်း”ပါ။
♦ အဲဒီအထဲမှာ “ဂတိသမ္ပတ္တိ” ဆိုတာ လူ့ပြည့် ၊
နတ်ပြည်၊ ဗြဟ္မာပြည်ကိုပြောတာပါ။ ဘ၀ကောင်းကိုရရှိခြင်းပေါ့၊
♦ “ဥပဓိသမ္ပတ္တိ” ဆိုတာက “ရုပ်အဆင်းလှပခြင်း” ကိုပြောတာပါ၊
လောကမှာ ဥပဓိသမ္ပတ္တိကလဲ အရေးကြီးပြန်ပါတယ်၊
အဲဒီ ဥပဓိသမ္ပတ္တိ ကိုရနေရင် အကုသိုလ်ကံ အကျိုးပေးခွင့်မသာတော့ဘူး၊
► သီဟိုကျွန်းမှာ “ဘာတိကမင်း” ဆိုတာရှိပါတယ်။
အဲဒီမင်းက တိုင်းသူပြည်သားတွေကို “နွားသားမစားရဘူး”လို့ အမိန့်ထုတ် ထားပါတယ်၊
ဒဏ်ငွေမဆောင်နိုင်ရင် နန်းတော်ထဲကိုခေါ်ပြီး အမှိုက်ကျုံးတာတို့၊ မြေတူးတာတို့ကိုလုပ်ရတယ်။
တစ်နေ့ မိသားစုတစ်စုက တားမြစ်ထားတဲ့ကြားက
နွားသားခိုးစားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ ဘုရင့်ရဲမက်တွေက မိရောဆိုပါတော့။
ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဒဏ်ငွေဆောင်ပေါ့။ဒါပေမယ့် အဲဒီမိသားစုက ဆင်းရဲတော့
နန်းတော်မှာက သူတို့မိသားစုတင်မကဘူးတဲ့။သူတို့လိုပဲ နွားသားခိုးစားကြတဲ့ တခြားမိသားစု တွေလဲပါတယ်၊အဲဒီနွားသားခိုးစားတဲ့ သူတွေကို ဒဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့
အမှိုက်သိမ်း၊ မြေတူး၊ မြက်နှုတ်ပေါ့။ဒါကိုဘာတိကမင်းက လေသာပြတင်းက ကြည့်နေပါတယ်၊
စောစောက ပြောခဲ့တဲ့ မိသားစုထဲမှာ
တော်တော်ရုပ်အဆင်းလှတဲ့ ကောင်မလေး ပါတယ်၊နေပူကြဲကြဲမှာ ချွေးသံတရွှဲရွှဲနဲ့ ဒဏ်ထမ်းနေတဲ့
အဲဒီရုပ်လှလှကောင်မလေးကိုမြင်တော့ ဘုရင်က “ဒီရုပ်ရည်နဲ့ ကြမ်းတမ်းတဲ့ အလုပ်တွေ မတန်ဘူး”ဆိုပြီး
“သမာဒေ၀ီ” ဆိုတဲ့ ဘွဲ့ပေးပြီး ဘုရင်က
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတဲ့အပြင် အသက်မွေး နိုင်လောက်အောင် ငွေကြေးတွေနဲ့
မ စလိုက်တယ်တဲ့။ဒါ ဥပဓိသမ္ပတ္တိ က အကျိုးပေးလိုက်တာပါပဲ၊
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဥပဓိသမ္ပတ္တိဟာ သူနဲ့နွယ်တဲ့
အဲဒီလို “ဥပဓိသမ္ပတ္တိ”နဲ့ ပြည့်စုံနေရင်လဲ
“အကုသိုလ်ကံ”က အကျိုးပေးခွင့် မသာပြန်ပါဘူး။
♦ “ကာလသမ္ပတ္တိ” ဆိုတာက မြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာ အခါ၊
စကြာဝတေးမင်းပေါ်ရာအခါ၊ မင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေပေါ်ရာအခါ ကိုပြောတာပါ၊
မြတ်စွာဘုရား ပွင့်နေရင် နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေ နာကြားခွင့်ရနေမယ်၊ စကြာဝတေးမင်း ပေါ်နေတဲ့ကာလဆိုရင်လဲ သူ့ဘုန်းကံအလျောက် တိုင်းပြည် ချမ်းသာ ကြွယ်ဝနေမယ်၊
မင်းကောင်း မင်းမြတ်တွေ အုပ်စိုးနေတဲ့ ကာလဆိုရင်လဲတိုင်းသူပြည်သားတွေ စားဝတ်နေရေး ၊
စီးပွားရေးတွေ ပြေလည်နေမယ်၊ ကျန်းမာရေးတွေ ကောင်းနေမယ်၊
အဲဒီ ကာလသမ္ပတ္တိနဲ့ ပြည့်စုံနေရင်လဲ “အကုသိုလ်ကံ”က အကျိုးပေးခွင့် မသာပြန်ဘူး။
♦ “ပယောဂသမ္ပတ္တိ” ဆိုတာက -
“သတိ၊ ၀ီရိယ၊ ဥာဏ်”တွေနဲ့ ပြည့်စုံနေတာကို ပြောတာပါ၊
လောကမှာ နေသမျှ ကာလပတ်လုံး အမြဲတမ်း သတိရှိနေမယ်၊
သွက်သွက်လက်လက် နိုးနိုးကြားကြားနဲ့ လုံ့လ၀ီရိယရှိနေမယ်၊အရာရာကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး
ထက်မြတ်တဲ့ ဥာဏ်ပညာရှိနေမယ်၊ သတိဝီရိယဥာဏ်တွေယှဉ်ပြီး အားကြီးတဲ့ ကုသိုလ်တွေပြုနေမယ်၊
အဲဒီလိုဆိုပြန်ရင်လဲ အကုသိုလ်ကံက အကျိုးပေးခွင့် မသာပြန်ဘူး၊
ကြည့်လိုက်ရင် ပယောဂသမ္ပတ္တိဆိုတဲ့ သတိ၊ ၀ီရိယ၊ ဥာဏ် ပညာနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေ
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 06:51:00 AM No comments:
အိပ်ပျော်နေစဉ်အသက်ရှုရပ်ခြင်းကြောင့် သေဆုံးမှုများအား ကာကွယ်ပေးမည့် အလိုအလျောက်အသက်ရှုခြင်းစနစ်
ပြန်ဆိုသူ- World Wide
လေဖြတ်ခြင်းနှင့် ရုတ်တရက်နှလုံးထိခိုက်ခြင်းများကြောင့် အသက်ရူရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း ဖြစ်စဉ်များသည် ယခုအခါတွင် ပိုမိုတိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဖြစ်စဉ်များအား ကုသရာတွင် CPAP မျက်နှာစွပ်ကိရိယာအား အသက်ရှုရန်အလို့ငှာ တပ်ဆင်ထားရသော်လည်း ၄င်းကိရိယာအနေဖြင့် လူနာများအတွက် သက်တောင့် သက်သာမရှိလှကြောင်း ကြားသိနေရပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ New England ဟုခေါ်သော ဆေးပညာဂျာနယ်တစ်ခုမှ လူ၏ ခနကိုယ်အတွင်းသို့ အီလက်ထရောနစ်ကိရိယာတစ်ခု (ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း) ထည့်သွင်း၍ ယခုကဲ့သို့ ဖြစ်စဉ်မျိုးအား ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိလျော့ချနိုင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါကိရိယာအနေဖြင့် လည်ချောင်းကြွက်သွားများအား အိပ်ပျော်နေစဉ်အမြဲတမ်း အသက်ရှုနိုင်ရန် (ပါးစပ်အနည်းငယ်ဟချင်းဖြင့်) ပြုလုပ်ခိုင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုစနစ်ကို အလိုအလျောက်အသက်ရှုခြင်းစနစ်ဟုလည်း အမည်ပေးထားပါသည်။
အဆိုပါကိရိယာအား ရင်ဘက်အရေပြားအောက်တွင် ထည့်သွင်းထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအနေဖြင့် နံရိုးနံပတ် ၄ နှင့် ၅ ကြားတွင်ထည့်သွင်းထားပြီး အသက်ရူခြင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို Hypoglossal Nerve ဆီသို့ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Nerve မှ မေးရိုးရှိကြွက်သားများအား အိပ်ပျော်နေစဉ်အတွင်း အသက်ရူနိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် လူနာအနေဖြင့် အဆိုပါကိရိယာအား အိပ်ချိန်၌သာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ထိန်းချုပ်အမိန့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အိပ်သည့်အချိန်မှလွဲ၍ ကျန်အချိန်များတွင် ကိရိယာအား လူနာအနေဖြင့် ပိတ်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သုတေသနပြုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ၁၂ အတွင်း လူနာပေါင်း ၁၂၆ ယောက်အား အဆိုပါကိရိယာ တပ်ဆင်ပေးပြီး စမ်းသပ်ခဲ့သည့်ရလဒ်မှာ လူနာများ အိပ်ပျော်နေစဉ် အသက်ရှုရပ် သေဆုံးခြင်းအား ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ လျော့ချနိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ သို့သော် အဆိုပါကိရိယာသည် လူတိုင်းအတွက်တော့ သင့်တော်မည်မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း သုတေသနသမားများမှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 06:32:00 AM No comments:
သတိထားဖွယ် ပုဗ္ဗစေတနာချို့တဲ့လျှင် ဆုိုးကျိုးနှင့် ပြည့်ဝလျှင် ကောင်းကျိုး
“ဒါန” ဟူသောဝေါဟာရသည် ပါဠိဝေါဟာရဖြစ်၏။
ဤဝေါဟာရကုို ဒါတဗ္ဗိန္တိ ဒါနံ ပေးလှူအပ်သောကြောင့် ဒါနမည်၏ဟု ဆုိုသောကြောင့် ပေးကမ်းလှူဒါန်းအပ်သည့်ဝတ္ထုပစ္စည်းသည် ဒါနမည်၏ဟု ကျမ်းဂန်များ၌မိန့်ဆုိုကြ၏။
ဤဒါနကုို ဝတ္ထုဒါန ဟုခေါ်၏။
ဒီယတိ ဧတေနာတိဒါနံ တစ်ခုတစ်ခုသော ပစ္စည်းဝတ္ထုကုို ပေးလှူကြောင်း၊ ဖြစ်သောကြောင့်
“မဟာကုသုိုလ်စိတ်” ၌ပါသော စေတနာတရားသည် ဒါနမည်၏။ ဤဒါနမျိုးကုို စေတနာဒါဟု ခေါ်သည်။
အလှူဒါနတစ်ခုဖြစ်လာရခြင်းမှာ အလုိုအလျောက် ဖြစ်လာခြင်းမျိုးမဟုတ်၊ စေတနာခေါ်သည့်
စေတသိတ်တရား၏ လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်၏ ။
ထုို့ကြောင့် စေတနာကုို ပေးလှူကြောင်းဟု ဆုိုရသည်။
စေတနာစေတသိတ်၏ လှုံ့ဆော်ပေးမှုကြောင့် ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ လှူဒါန်းမှုဆုိုသည့် ဒါနကုသုိုလ်တရား
ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လာရ၏။ ထုိုစေတနာမျိုးရှိမှ ဒါနမှုအထမြောက်သည်။
ထုို့ကြောင့် လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတုို့ကုို ပေးကမ်းလှူဒါန်းရာ၌
ထုိုဝတ္ထုပစ္စည်းတုို့ ဖြစ်ရာကာလမှစ၍ အလှူမီ ရှေ့အဖုို့၌ဖြစ်စေ၊
လှူဒါန်းပေးကမ်းဆဲ၌ဖြစ်စေ၊ လှူဒါန်းပေးကမ်းပြီး နောက်၌ဖြစ်စေ အချိန်သုံးမျိုးလုံး၌ ဖြစ်ပေါ်လာသော စေတနာသည် ဒါနခေါ် ပုညကိရိယာဝတ္ထုမည်၏ ဟု
အဋ္ဌသာလိနီအဋ္ဌကထာတွင် ဖွင့်ဆုိုထားခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ဝတ္ထုဒါန စေတနာဒါနနှစ်မျိုးတွင် စေတနာကသာ
ကံတရားဖြစ်၍ တုိုက်ရုိုက်အကျိုးပေးနုိုင် သောကြောင့် ဝတ္ထုဒါနထက် စေတနာဒါနက ပုိုအရေးကြီး၏။
စေတနာသည်လည်း ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အချိန်ကာလအပုိုင်းအခြားအရ
♦ (၂) မုဉ္စစေတနာ၊
♦ (၃) အပရစေတနာဟူ၍
မစွန့်လွှတ် မလှူဒါန်းမီ ရှေ့အဖုို့တွင် ကြိုတင်၍ ဒါနနှင့်ဆက်သွယ်ပြီး
“သိန်းသန်းကုဋေမက ဖြစ်ဖြစ်သမျှ စေတနာ” များဖြစ်၏။ ရှေ့အဖုို့ဆုိုသော်လည်း လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်း ထင်ရှားရှိနေပြီးမှ ဤပစ္စည်းကုို လှူဒါန်းမည် စသည်ဖြင့် ကြံစည်ရည်ရွယ်နေခြင်း
စသည်မျိုးဖြစ်၏။ ပစ္စည်းဝတ္ထုမရှိမီ လှူဒါန်းမည်ဟု အလုိုအလျောက်
ကြံစည်စိတ်ကူးရာတွင် ပါဝင်သည့် စေတနာမျာကား ပုဗ္ဗစေတနာဟု ခေါ်လုိုက ခေါ်နုိုင်သော်လည်း
ဒါန အတွင်းသုို့ မသွတ်သွင်းနုိုင် ၊ သာမညကုသုိုလ်မျိုးသာ ဖြစ်နုိုင်၏ဟု မင်းကွန်းတိပိဋက
လှူဒါန်းသူအား ထုိုထုိုပစ္စည်းဝတ္ထုများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီးသည်မှစ၍ မလှူမီ
ရှေ့ အဖုို့၌ဖြစ်သော စေတနာသည် ဒါနမယပုညကိရိယာဝတ္ထုမည်၏ဟူသော
ထုိုပုဗ္ဗစေတနာများကား ပုဗ္ဗေဝ ဒါနာ သုမနော
(လှူဒါန်းသည်မှ ရှေ့အဖုို့၌ စိတ်ကြည်လင် တက်ကြွခြင်း၊ဝမ်းသာရွှင်ပျနေခြင်း) ဘုရားဟော ဒေသနာတော်အတုိုင်း လှူဖွယ်ပစ္စည်း ထင်ရှားရှိပြီး၍ မလှူဒါန်းမီရှေ့ပုိုင်းမှာ
စိတ်ကြည်ကြည်လင်လင် ရွှင်ရွှင်ပျပျ ဖြစ်နေမှုများပင် ဖြစ်၏။ လှူဒါန်းမှုဒါနကိစ္စနှင့် မဆက်သွယ်ဘဲ
အခြားကိစ္စများအတွက်ဖြစ်သည့် စေတနာမျိုးကုို ဤဒါနအရာ၌ ပုဗ္ဗစေတနာဟု မခေါ်နုိုင်ပါချေ။
(ပုဗ္ဗစေတနာ- ထင်ရှားရှိနေသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းကုို မလှူဒါန်းမီ ရှေ့ပုိုင်းကာလ၌
အလှူနှင့် စပ်၍ဖြစ်သော စေတနာ)။
စေတနာသုံးတန် ထက်သန်ပြည့်စုံသည်ကုို မဆုိုထားဘိ၊
မိမိ၏ ပစ္စည်းဥစ္စာကုို အလှူခံလက်သုို့ မပေးလှူမီ ပုဗ္ဗစေတနာထက်သန်ရုံမျှဖြင့်ပင် ကြီးမြတ်သော
အကျိုးကုို ရရှိနုိုင်ပေသည်။ မှန်၏။
ရှေးအခါက ရာဇဂြိုဟ်ပြည်သူ ကလေးတစ်ဦးသည်
ခါးလွန်း၍ လူအများမလုိုချင်သည့် ရွှေဝါရောင်အဆင်းကဲ့သုို့ ဝါဝင်းနေသော “သပွတ်ခါးပန်းလေးပွင့်”ကုို
မြတ်စွာဘုရား၏ ဓာတ်တော်များ ကိန်းအောင်နေသည့် ဓာတုစေတီတော်အား ဆက်ကပ်လှူဒါန်းရန်
စေတီတော်သုို့ ဦးတည်၍ ဒီပန်းလေးပွင့်ကုို
ဓာတုစေတီတော်မြတ်အား ငါလှူဒါန်းမယ်- ဟု ကြည်လင်သည့် စိတ်စေတနာဖြင့်
လျှောက်လှမ်းလာသည့်အတွက် လမ်း၏ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်များကုို သတိမပြုမိခဲ့ချေ။
တစ်နေရာသုို့အရောက်တွင် လမ်းဘေးရှိ နွားအုပ်ထဲမှ
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 06:30:00 AM No comments:
ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့ နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ နေရာက မြို့ တစ်မြို့ ဖြစ်ပြီး Yukutsk လို့ အမည်ရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အအေးဆုံး ရေခဲတိုက် အာတိတ်စက်ဝိုင်းရဲ့ တောင်ဘက် မိုင် ၂၈၀ အကွာမှာသာ ရှိနေတဲ့ မြို့ တစ်မြို့  ဖြစ်ပါတယ်။
ပျမ်းမျှ အပူချိန် အနုတ် ၄၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အအေးဆုံး မြို့ အဖြစ် စံချိန်တင်စေပါတယ်။ စံချိန်တင် အနေနဲ့ အနုတ် ၆၄.၄ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် အထိ ကျဆင်းပြီး လာမယ့် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းလည်း အဲ့ဒီထက် ကျဆင်းအုံးမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြ ပါတယ်။ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်းက အနုတ် ၄၈ ဒီဂရီ ရှိပါတယ်။ - ၅၂ ဒီဂရီ ရှိတဲ့ နေ့တွေမှာ ကျောင်းကို ယာယီပိတ်ထားရ ပါတယ်။ မြို့က မသေးပါဘူး။ လူဦးရေ ၂သိန်း၇သောင်း နေထိုင်ပြီး ဆိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ လူဦးရေရဲ့  လေးပုံပုံ တစ်ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ ရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ရေခဲများ ဖုံးလွမ်းနေပြီး နေ့ရော၊ ညပါ လမ်းမတွေပေါ် အဝေးမမြင်ရအောင် ဖုံးလွမ်းနေပါတယ်။ ယင်းအအေးဒဏ်ကို အမြဲခံစားနေတဲ့ မြို့ခံ လူများအတွက်ကတော့ မထူးဆန်း တော့ ပါဘူး။ လူငယ်များကတော့ ညဘက်မှာ နိုက်ကလပ်၊ ဘားများသို့ သွားပြီး ကခုန်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ အအေးဆုံးမြို့ လို့ စံချိန်တင်ထားတဲ့ ရုရှားနိုင်ငံ Yukutsk မြို့ က အလှဓာတ်ပုံများကို အောက်ပါ Link မှာ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 06:17:00 AM No comments:
မြေပဲ၊ မြေပဲထောပတ်၊ ပြောင်း၊ ဆန်တို့ပေါ်ရှိ မှိုပိုးမှထွက်သောအဖလာအဆိပ်ကို စားမိခြင်း၊
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 06:03:00 AM No comments:
BMW ကုမ္ပဏီမှထုတ်သောကားများကို ယောကျာ်းများကြိုက်ကြသော်လည်း BMW (Big Mouth Women)မိန်းကလေးများကိုတော့ လန့်တတ်ကြသည်။ တစ်အိမ်တက်ဆင်းဖြင့် အတင်းပြောနေရလျှင် ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့သောသူဖြစ်သည်။ တစ်ခါတရံ သူမပြောသော စကားများသည် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း ယောကျာ်းလေးများကို သူမအား ထောက်ခံရန် မဲဆွယ်တတ်သေးသည်။ တချို့ယောကျာ်းလေးများက မထောက်ခံလျှင် သူမသာ အမှန်ြဖစ်ကြောင်း ငြင်းချက်များထုတ်တတ်သေးသည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုးကို အိမ်ထောင်ပြုမိပါက ယောက္ခမနှင့် ချွေးမတို့၏ စစ်ပွဲ စတင်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၄င်းအပြင် ဆွေမျိုးသားချင်း သူငယ်ချင်းများကပါ စက်ကွင်း မလွတ်နိုင်တော့ချေ။ အတင်းပြောတတ်သော အမှန်မကန် စကားပြော တတ်သော မိန်းကလေးများကို ယောကျာ်းလေးများသာမက မိန်းကလေးများလည်း ဝေးဝေးရှောင် နိုင်ရမည်။သူမ၏ အမှန်မကန် ပြောသော စကားလေပွေထဲတွင် ၀င်မပါမိအောင် သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။
(၉) လမ်းခွဲစကားပြောလွယ်သောမိန်းမ
မိန်းကလေးတိုင်းချွဲနွဲ့တတ် သည်မှာ သဘာဝပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အချွဲနွဲ့လွန် မိန်းကလေးများမှာ လူအမြင်ကပ်စရာဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုးသည် အမြဲတမ်း အချော့ခံချင်၊ လူတွေဂရုစိုက်နေတာကို ခံချင်နေသော မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်သည်။ လူရှေ့တွင် စကားပြောလျှင် နုတ်ခမ်းလေး ဟချင် မဟချင် နှင့်(ခေတ်စကားနှင့်ပြောရလျှင် ဘဲများလွန်းနေခြင်းဖြစ် သည်) လူကွယ်ရာတွင်မှု ဆန့်ကျင် ဖက် ဖြစ်နေတတ်သည်။ ယခုခေတ် မိန်းကလေးများသည် တဖက်သား သနားကြင်နာလာအောင် ညုာတာလာအောင် ဟန်ဆောင်ချွဲနွဲ့ပြီး အားနွဲ့ မနေသင့်တော့ပေ။ ယောကျာ်းလေးတွေနှင့် တန်းတူ မဟုတ်တောင် ယောကျာ်းလေးနီးနီး လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်းကို ပြသင့်သောအချိန်ပင်ဖြစ်သည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 05:49:00 AM No comments:
Bus ကားပေါ်က ဆင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် အခိုးခံလိုက်ရပြီဆိုတာ သူသိလိုက်တယ် ..
အိတ်ထဲမှာ အရေးကြီးတာတွေတော့မပါပါဘူး … ပိုက်ဆံတစ်သောင်းခွဲလောက်ရယ် … သူ့အမေဆီ ပို့ဖို့စာတစ်စောင်ပါတဲ့ စာအိတ်တစ်အိတ်ရယ်ပဲပါတယ် …
စာထဲမှာတော့ “ကျွန်တော်အလုပ်ဖြုတ်ခံလိုက်ရပြီ … ဒါကြောင့်ဒီတစ်လ အမေ့ဆီပိုက်ဆံပို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး” ဆိုတာပဲရေးထားတာပါ …
သူ့အိတ်ထဲမှာ အဲ့ဒီစာ ရှိနေတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီ … သူ့အမေစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာသိလို့ မပို့ဖြစ်ဘဲ သောင်တင်နေတာပါ …
တစ်သောင်းခွဲဆိုတာတော့ များပြားလှတဲ့ငွေပမာဏမဟုတ်ပေမယ့် ဒီလိုအလုပ်မရှိတဲ့အချိန်မှာ မိသားစုကို ပြန်ကြည့်နေရတဲ့ သူ့အဖို့တော့ တစ်သောင်းခွဲဟာ တစ်သိန်းခွဲလိုပါပဲ …
ရက်အနည်းငယ် ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့အမေဆီက စာတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့တယ် ..
သူပိုက်ဆံမပို့လို့ သူ့အမေများငွေလိုနေပြီလားဆိုပြီး စိုးရိမ်သွားခဲ့ပေမယ့် စာကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ သူထိတ်လန့်သွားခဲ့တယ် ..
စာထဲမှာ “ကျေးဇူးပါပဲသားရယ် .. သားပို့လိုက်တဲ့ ငွေငါးသောင်းအမေရတယ်” လို့ရေးထားတာပါ။
သူ့အမေဆီဘယ်သူပိုက်ဆံပို့လိုက်လဲဆိုတာ သူစဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့တယ် ..
ရက်အချို့ကုန်လွန်သွားပြီးတဲ့အခါ သူ့အမေဆီက နောက်ထပ်စာတစ်စောင်ရောက်လာတယ် ..
“သားရေ … အရမ်းသေးလွန်းတဲ့လက်ရေးနဲ့စာတစ်စောင် အမေ့ဆီရောက်လာတယ်၊ ဒါပေမယ့် အမေ့မျက်မှန်ကကျိုးနေတော့ မဖတ်နိုင်တာနဲ့ သားဆီကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်”
သူဟာ စာကိုဖွင့်လိုက်တယ်၊ စာထဲမှာရေးထားတာက …
“ငါမင်းပိုက်ဆံ တစ်သောင်းခွဲကို သုံးသောင်းခွဲထပ်ပေါင်းပြီး မင်းအမေဆီကို ပိုက်ဆံငါးသောင်းပို့ပေးလိုက်တယ် … တကယ်တော့ အမေအားလုံးဟာ အမေပါပဲ … သူမ ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ် … ငါ့အမေသာရှိနေသေးရင် ငါလည်း ငါ့အမေကို ဒီလိုဖြစ်စေချင်မှာ မဟုတ်ဘူး ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မင်းတတ်နိုင်သမျှ အလုပ်မြန်မြန် ရအောင်ရှာပြီး မင်းအမေကိုစောင့်ရှောက်ပါ …
ကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်၊ မကောင်းတဲ့အလုပ်နဲ့ အသက်မွေးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ် အမေတစ်ယောက်အပေါ်မှာထားတဲ့ ခံစားချက်ကတော့ လူသားတိုင်း အမြဲ အတူတူပါပဲ …
( Admin >> TT )
By Heart Canteen
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 05:44:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 05:37:00 AM No comments:
ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ခရီးဝေးသွားတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ဦးဟာ.. ပင်ပန်းလို့ ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ဝင်တည်းတယ်။
သူမအနေနဲ့ ခဏအိပ်စက်အနား ယူပြီး.. ခရီးဆက်သွားရမှာဖြစ်တယ်။
လေးနာရီလောက်အိပ်ပြီးနောက်.. အောက်ဆင်းလာပြီး ဟိုတယ် တည်းခိုခ ရှင်းပါတယ်။
တည်းခိုခရှင်းတော့.. ဒေါ်လာ ၄ ထောင် တောင်ကုန်ကျပါတယ်။
ဒီတော့.. ဒါကို မကျေနပ်တဲ့အတွက် မန်နေဂျာကို ကွန်ပလိန်း တက်ပါတယ်။
မန်နေဂျာက အောက်ပါအတိုင်း.. ရှင်းပြပါတယ်...
မန်နေဂျာ။ ။ "ကျနော်တို့ ဟိုတယ်က ကြယ်ငါးပွင့် အဆင့်ရှိ ဟိုတယ်ပါ။ ရေကူးကန်လည်း ရှိပါတယ်.."
အမျိုးသမီး။ ။ " ဒါပေမယ့််.. ကျွန်မ မသုံးဘူးလေ.."
မန်နေဂျာ။ ။ " ကမ္ဘာကျော် အဆိုတော်တွေလည်း.. လာရောက် ဖျော်ဖြေပါတယ်.."
အမျိုးသမီး။ ။ " ကျွန်မ.. သွားမကြည့်ခဲ့ပါဘူး..."
မန်နေဂျာ။ ။ " အေးအေးဆေးဆေး ကိုယ်လက်သန့်စင် အပန်းဖြေဖို့ အတွက်.. ချွေးထုတ်ခန်းလဲ.. ထားပေးပါတယ်.."
အမျိုးသမီး။ ။ " အဲ့ဒါလည်း.. ကျွန်မ မသုံးဘူး..."
မန်နေဂျာ။ ။ " ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဝိုင်နဲ့ အရက်များလည်း ပေးထားပါတယ်.."
အမျိုးသမီး။ ။ " အဲ့ဒါတွေလည်း.. ကျွန်မ မသောက်ခဲ့ဘူး..."
မန်နေဂျာ။ ။ " စိတ်မရှိပါနဲ့.. လာရောက် တည်းခိုသူတွေအတွက် ကျနော်တို့က သုံးဖို့ အသင့်ပြင်ထား တာဖြစ်တာကြောင့်.. သုံးသည်ဖြစ်စေ.. မသုံးသည် ဖြစ်စေ... အသုံးပြုစရိတ်ပါ ပေါင်းပြီး.. ဒေါ်လာ ၄ ထောင် ယူပါတယ်.."
အမျိုးသမီး။ ။ " ဟုတ်ပီလေ.. ရော့.. ဒီမှာ ဒေါ်လာ ၁ ထောင်.."
မန်နေဂျာ။ ။ " ၄ ထောင် ပေးရမှာလေ.. မမလေး..."
အမျိုးသမီး။ ။ " အင်း.. ဟုတ်တယ်.. ရှင်.. ကျမနဲ့ အိပ်ခအတွက် ၃ ထောင် ရစရာ ရှိတယ်လေ.. အဲ့ဒါ.. ဖြတ်လိုက်တယ်.."
မန်နေဂျာ။ ။ " ကျနော် ဘယ်တုန်းက အမနဲ့ အိပ်ခဲ့လို့လဲ..ဗျာ.."
ဒီတော့ အမျိုးသမီးက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေပြီး.. လှည့်ထွက်သွားပါတော့တယ်...
" စိတ်မရှိပါနဲ့ရှင်... ရှင်အိပ်သည် ဖြစ်စေ..မအိပ်သည်ဖြစ်စေ.. ကျွန်မက အခန်းထဲမှာ အသင့်ရှိနေတဲ့ အတွက်..
ကျမကတော့.. ဒါကိုပေါင်းပြီး.. ကုန်ကျစရိတ် ထည့်တွက်ပါတယ်.."
" အဟွင့်.. လုပ်ရက်ပါ့..အမရယ်..!!! "https://www.facebook.com/photo.php?fbid=533754030055766&set=a.35104771499306
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/30/2014 05:36:00 AM No comments:
တွယ်တာမှုကို စွန့်လွှတ်မှုနဲ့ လျော့ချပါ
တွယ်တာမှုကို စွန့်လွှတ်နိုင်မှုနဲ့ပဲ လျော့ချရပါမယ်။
မဟုတ်ရင် တွယ်တာမှုဆိုတာ ...ကြာလေချည်နှောင်ခံရလေ ဖြစ်ပြီး
အဲဒီကတဆင့် ပူလောင်မှုအထိ ဖြစ်စေတော့တာပါ။
တွယ်တာမှုရဲ့သဘောက လူကိုပဲတွယ်တွယ်၊ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုပဲတွယ်တွယ် အတွယ်များရင်
အလွန်အကျွံ တွယ်တာမိလိုက်တဲ့အတွက် အဲဒီ ကိုယ်တွယ်ထား၊
ကိုယ်မြတ်နိုးတန်ဘိုးထားတဲ့ အရာတစ်ခု ပျက်ဆီးမှုနဲ့ကြုံတဲ့အခါ
အဲ တွယ်တာမှုကို စွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့
စွမ်းအားရှိတဲ့သူကျတော့ ဖြေဆည်ရာကို တရားနဲ့ ရှာသွားနိုင်တော့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စွန့်လွှတ်နိုင်မှုဟာ ရယူလိုမှုကိုလည်း လျော့ချနိုင်သလို ၊
တွယ်တာမှုကြောင့် ခံစားရတဲ့ ပူလောင်မှုကိုလည်း လျော့ချနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အပူသက်သာချင်ရင် တွယ်ထားတဲ့ အရာမှန်သမျှ စွန့်လွှတ်မှုနဲ့ လျော့ချကြည့်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- [မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ (ဒိုက်ဦး)]
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/29/2014 08:45:00 AM No comments:
ဦးနှောက်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ၁၂ချက်
၁။ သင့်ဦးနှောက်က သင့်ရဲ့ အထိအတွေ့ကို မှတ်မိနေ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကလိထိုးတဲ့ အခါ မယားပါဘူး။
၂။ ဦးနှောက်က အိပ်မက် မက်တဲ့ အချိန်မှာ နိုးနေတဲ့ အချိန်ထက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပိုမို လုပ်ဆောင် ရပါတယ်။
၃။ တစ်ရက်ကို ပျှမ်းမျှခြင်း အားဖြင့် အတွေးပေါင်း ၇၀၀၀၀လောက် တွေးလေ့ ရှိပါတယ်။
၄။ သင့်ဦးနှောက်က လျှပ်စစ် watt ပေါင်း ၁၀-၂၃ watt ထိထုတ်ပါတယ်။
၅။ သင့်ဦးနှောက်ကို အပြည့်အ၀ အသုံးချ နေရပြီး ၁၀ရာခိုင်နှုန်းကို မသုံးဘဲ ထားတယ် ဆိုတဲ့ အယူက မမှန်ပါဘူးတဲ့။
၆။ ဦးနှောက်က pain receptors မပါဝင် တာကြောင့် နာကျင်မှုကို မခံစား နိုင်ပါဘူး။ ခေါင်းကိုက်တာဟာ နာဗ်ကြော တွေနဲ့ ခေါင်းထဲက ကြွက်သား တွေက ခံစား သိနိုင်တာပါ။
၇။ stress ဖိအားတွေက ဦးနှောက်ရဲ့ ဆဲလ်တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြောင်းလဲ ပစ်နိုင်ပါတယ်။
၈။ တေးဂီတက ဦးနှောက်ကို ပိုပြီး စည်းစနစ် ကျကျဖြစ်အောင် ကူညီပေး ပါတယ်။
၉။ ဦးနှောက်က amygdala ကတခြားသူ တွေရဲ့ မျက်နှာက ခံစားချက် အပြောင်းအလဲကို ဖတ်တဲ့နေရာမှာ ကူညီပေး ပါတယ်။
၁၀။ ဦးနှောက်က သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေပြုလုပ် နိုင်ဖို့ သွေး၂၀ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ အောက်ဆီဂျင်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။
၁၁။ သင်ချစ်တတ်တယ် ဆိုတာ ဦးနှောက်ထဲက chemical တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ "Oxytocin" ကြောင့်ပါ။
၁၂။ ဦးနှောက်ရဲ့ သွေးကြောလေး တွေကို ဆက်ကြည့်လိုက် မယ်ဆိုရင် မိုင်တစ်သိန်းလောက် ရှိပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/29/2014 08:08:00 AM No comments:
အိတ်ဆောင် အဘိဓါန်ပါ။တော်တော်လေးမိုက် တယ်။ကွန်ပြူတာနဲ့ ပါတ်သတ်
တာလေးတွေကို ရှင်းပြထားတာပါ။ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း KB ပဲရှိတာ။အသုံးလိုရင်တော့အောက်ကလိပ်စာမှာရယူလိုက်ပါ။အဆင်ပြေပါစေ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/29/2014 08:03:00 AM No comments:
ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ပါဝင်ရေး မူအားဖြင့် လက်ခံလိုက်ပြီ
နိုင်ငံစုံတပ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ပါဝင်ရန် ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို မြန်မာ့တပ်မတော်က လက်ခံလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ နမ်ဗီးယားက မြန်မာ့တပ်မတော် အကြီးအကဲနှင့် ယခုရက်ပိုင်းတွေ့ဆုံစဉ်က ကမ်းလှမ်းခဲ့မှု အပေါ် မြန်မာတပ်ဘက်မှ လက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံ တော် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက အတည်ပြုပြောသည်။ ''မူအားဖြင့် နှစ်ဖက်လက်ခံလိုက်တာပါ'' ဟု ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့လက်ခံမှုသည် တပ်မတော်အစိုးရ လက်ထက် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံး လက်ခံခြင်းဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်နှစ်ဖက်ဆက် ဆွေး နွေးရမည့်ကိစ္စဖြစ်၍ ယခုအချိန်တွင်ပြောဆိုရန် စောလွန်းနေသေးသည်ဟု ဦးဇော်ဌေးက ဆက် ပြောသည်။
''အဆင့်မြင့်သင်တန်းတွေ ပေး ထားတာတွေက တပ်မတော်မှာ ရှိထား ပါတယ်။ နောက်ပြီး အရာရှိလွှတ်မလား ဒါမှမဟုတ် အခြား အဆင့်လွှတ်မလား စတာတွေ ရှိတော့ သေသေချာချာ မ ပြောနိုင်သေးတာပါ'' ဟု ၎င်းက ထပ် လောင်းဆိုသည်။
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ပိုင်းမှ စကာ EU အပါအဝင် ဗြိတိန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် အပါအဝင် မြန်မာ့တပ်မတော်ကို
အဆင့်မြင့် သင်တန်းများပေးရန် ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကမ်းလှမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး
လက်တွေ့ အ ကောင်အထည်ဖော်မှု အချို့ကို ဆောင် ရွက်ပေးခဲ့သည်။
တပ်မတော်သားဟောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သည့်အပြင် လက်ရှိတွင် အမျိုးသား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ ဦးလှဆွေက ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ သဘောတူ လက်ခံလိုက်မှုကို ကြိုဆိုကြောင်း ထောက်ခံပြော သည်။ နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား တတ် ကျွမ်းပြီး အရည်အချင်း ပြည့်မီသော အရာရှိနှင့် စစ်သည်များ တပ်မတော်တွင် ရှိ၍ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်းဘက်တွင် လည်း တပ်မတော်က အခက်အခဲမရှိ နိုင်ဟု ဦးလှဆွေက Popular News သို့ ပြောသည်။
၁၉၄၅ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီး ဖွဲ့စည်းပြီးစဉ်ကတည်းက ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင် ငြိမ်း ချမ်းရေးထိန်းသိမ်းရန် ကုလသမဂ္ဂ ငြိမ်း ချမ်းရေးတပ်များကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကုလ ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွင် ကုလ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအသီးသီးမှ တပ်မတော် သားများ၊ အရာရှိများ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ နှင့် အရပ်ဘက် ဝန်ထမ်းများလည်း ပါ
ကုလငြိမ်းချမ်းရေးတပ်သည် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ခြင်း၊ အာဏာခွဲဝေ ကျင့် သုံးစေခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပရန် အကူအညီပေးခြင်း၊ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေးကို အထောက်အကူပေးခြင်းနှင့် လူမှု စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေး ပုံစံနည်းနာများ ကို ကျင့်သုံးပြီး ပဋိပက္ခလွန်ဒေသများ တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး
တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။
ဦးထုပ်ပြာများဟု ခေါ်ဆိုကြသည့် ကုလငြိမ်းချမ်းရေး တပ်ဖွဲ့များသည် ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်အရ လက်ခံထား သော ဘောင်အတွင်းမှနေ၍ အင်အား သုံးကာ ပဋိပက္ခများကို ဖြေရှင်းကြရပြီး နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီကို ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်က စု ပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်နှင့်အာ
ဏာကို အပ်နှင်းထားသည်။ ယခုကာလများတွင် International Criminal Court အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရာဇဝတ် မှု တရားရုံး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် မြေမြှုပ် မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ကုလငြိမ်းချမ်းရေး တပ်များက လုပ် ဆောင်လျက် ရှိကြသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/29/2014 07:53:00 AM No comments:
မျိုးစောင့်ဥပဒေ PDF Download
မျိုးစောင့်ဥပဒေကို လေ့လာလိုသူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေ ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဖတ်ရှုလိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ပါလင့်တွင် ဒေါင်းနိုင်ပါကြောင်း . . .
For Download : http://www.mediafire.com/download/gnxcc0v8sh86w48/NI+Law+PDF.pdf
Credit : Ko Phyo
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/29/2014 07:33:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/29/2014 07:15:00 AM No comments:
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် (ခ) မာကျူရီဂြိုဟ် သို့
ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် (ခ) မာကျူရီဂြိုဟ် သို့ အာကာသယာဉ် ဘယ်နှစ်စင်း သွားရောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ...
ယနေ့ အချိန်အထိ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သို့ ဂြိုဟ်တု နှစ်စင်း ရောက်ရှိပြီးပါပြီ။ ပထမဆုံး တစ်စင်းကတော့ မာရီနာ ၁၀ (Mariner 10) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ၁၉၇၄ - ၇၅ ခုနှစ်လောက်က ရောက်ရှိခဲ့တာပါ။ မာကျူရီကို သုံးကြိမ် ပတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂြိုဟ်ရဲ့ မြေပုံကို တစ်ဝက်ခန့် မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် မာကျူရီရဲ့ ပါးလွှာတဲ့ လေထုကိုလည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒုတိယမြောက် တစ်စင်းကတော့ မက်ဆင်ဂျာ (Messenger) အာကာသယာဉ်ပါ။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၄၆ သန်း အကုန်ကျခံ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ လွှတ်တင်ခဲ့နိုင်ခဲ့ကာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ မာကျူရီကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ မာကျူရီရဲ့ မြေပုံကို ၁၀၀% မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘီပိ ကိုလံဘို ဆိုတဲ့ အာကာသယာဉ်ကိုတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ လွှတ်တင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှာ မာကျူရီကို ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပုံအညွှန်း။ မာရီနာ ၁၀၊ မက်ဆင်ဂျာ နှင့် ဘီပီ ကိုလံဘို အာကာသယာဉ်
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/29/2014 07:05:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 1/28/2014 07:10:00 AM No comments:
သတိထားဖွယ် ပုဗ္ဗစေတနာချို့တဲ့လျှင် ဆုိုးကျိုးနှင့်...
ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့ တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်ပ...
လင်းလင်း နှင့် ချစ်သုဝေ တို့၏မင်္ဂလာဦးဆွမ်းကျွေးအလှ...
ကိုယ်ဝန်နဲ့ လေယာဉ်ခရီး Pregnancy and Air Travel
ထီပေါက်စဉ်ကြည့်မယ် ဆော့ဝဲလ် for Android
လူ့မစင်ဖြင့်လုပ်သော ဆေး အူနှင့်ဆိုင်သည့် ရောဂါ ပျေ...
ခြင်ဆေးတစ်ခွေသည် ဆေးလိပ် ၁၃၀ ကျော် နှင့် ညီမျှ
ဘီယာတစ်ခွက်နဲ့ မိဘမဲ့ကလေးတစ်ယောက် ရဲ့ထမင်းတနပ်
အသက် အငယ် ဆုံး ဘီလျှံနာ အမျိုး သမီး
Facebook မှာ Dislike buttom မပါရခြင်းအကြောင်း
သမိုင်းတစ်လျှောက် ရက်အတိုဆုံး လတစ်လ
Finland နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကတော့ထူးခြားတယ်
ငွေဖြည့် ကတ်ဖြင့်အင်တာနက် Wi-Fi သုံးနိုင်စေရန် စီ...
တံခါးပေါက် ပိတ်စရာမလိုတဲ့ နိုင်ငံ
မိကျောင်းနှုတ်သီးနှင့် ငါးကြီး လှိုင်မြစ်အတွင်းဖမ်းမ...
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆ...
အလုပ်မရှိဘူးလား.. စားပွဲထိုးလုပ်ပါလား ----- ဗြိတိန...
တစ်ကိုယ်လုံး ထိုးဖောက်မြင်ရတဲ့ ဂျယ်လီငါးမျိုးသစ်ေ...
တက္ကသိုလ်တက်ရင်း အဖေကို အချိန်ပြည့်ပြုစုသူ
File များကို အလွယ် တကူ Upload လုပ်ပြီး Share မယ်
အိမ်ထောင်ရှင်များ သိထားရမည့် လင်နှင့် မယားဆက်ဆံရေး...
ဂျူးလူမျိုး မိန်းကလေးငယ်ကို ဟစ်တလာ ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ...
စာအုပ်များ ဖတ်ရှုနိုင်မည့် Public Digital Library ဝ...
ဓာတ်ပုံရိုက်တိုင်း လျှာထုတ်ရတဲ့ မယ်လီဆိုင်းရက်စ်ရဲ...
ကမ္ဘာ့ နာမည်အကြီးဆုံး ဈေးအသက်သာဆုံး လိုဂိုလေလား
အောင်နန်းရွာ က ထူးထူးခြားခြား ခြင်္သေ့များ
ဆေးခြောက် သုံးစွဲသူများအတွက် သိထားသင့်သော အချက်မျာ...
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လာတဲ့ ကျားကြီး မူလန်နဲ ...
သီလ၏ ကြောင်းကျိုး အဆက်ဆက်
အောင်မြင်သော ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်လာဖို့အတွက် အချက် ၁၀ခ...
န၀ရတ် ကိုးပါးလက်စွပ် (န၀ရတ် လက်စွပ်)
အိပ်ရေးပျက်ပါက ခေါင်းကို အရိုက်ခံလိုက်ရခြင်းနှင့် ...
ကလေးကို အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဖြင့် ထားရှိခြင်း အကျိုးကေ...
သင်ခန်းစားပေါင်းများစွာ ပေးတဲ့ Monsters University...
DVD အချပ်ပေါင်း ၇သောင်းခွဲနဲ့ညီမျှတဲ့ Data Storage...
အတက်အကျ အင်တာနက်ဖြစ်ရပ်များ နဲ့ အင်တာနက် အမြန်ဆုံး...
ကားမောင်းနေစဉ် မလုပ်သင့်သော အမှုအကျင့်များ
မိနစ်ဝက် ၃ မျိုး ၊နာရီဝက် ၃ မျိုး
သုက်ကောင် (sperm) အကြောင်း
ကနေဒါလူဦးရေထက် Candy Crash ကစားသူ များပြား